ओमकार टाइम्स तपाईको जन्म कुन बार हो ? हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्य, धन प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन ? – OMKARTIMES
तपाईको जन्म कुन बार हो ? हेर्नुहोस् आफ्नो भाग्य, धन प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन ?
आइतबार : पुरुष आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । स्त्री आइतबार जन्मिने स्त्री दान(पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् ।
धनी देशहरूले खोपको लाइन नमिच्नू – डब्लुएचओ
बालविवाह गर्ने गराउने ४ जना पक्राउ
विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना, पाँच जना घाइते
मेचीपारि पहिलोपटक प्रहरीको अस्थायी बिट